C/waliyoow: Labada Koofur tee kuu daran?! | KEYDMEDIA ONLINE
C/waliyoow: Labada Koofur tee kuu daran?!
Bashiir M. Xersi — Wadaad xume ayaa beri raacay TABLIIQ, si dad loo soo wacdiyo (HANUUNIYO). Sheekh ku sheegga Wadaad xumaha ah wuxuu UBBO yar ku sitaa Qamri. Intii la sii socday oo dhan ayuu qujuc, dhukub ku hayay. Wadaaddada kalee TABLIIQA ah, ee la socota Wadaad xumaha ma oga Qamrigiisa!
Meeshii loo socday markii la gaaray iyo waxaa isku soo beegmay isagii (Wadaad xume) oo saqraansan. Wadaad xumihii saqraansanaa ayaa hadalkii billaabay, wuxuu is yiri bal Qamriga iyo xumaantiisa wacdiga ka billow, sidii ayuuna yeelay. Markuu wacdigii cabbaar waday, ayaa mid u dhawaa oo dhiniciisa taagnaa ay gaf ku soo tiri kahdii Qamriga, oo waxaa u soo urtay Qamragii wadaad xumuhu soo cabbay, markaasuu si niyad ah u yiri: “SHEEQOOW MA NAGA HUBTAA?”
Dagaalka waa in deg deg loo joojiyo, laysuguna yimaado gogol wada xaajood
Tiisa daryeelaa tu kale ku dara!